बहालवाला अर्थमन्त्रीकै घरमा मेयरले यसरी लगाए डोजर (हेर्नुहोस भिडियो) - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१५ चैत्र २०७४, बिहीबार ११:२७ March 31, 2018 Nonstop Khabar
धनगढी, १५ चैत । प्रदेश नम्बर ७ का अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराको घेर मेयरको डोजरले भत्काइदिएको छ । कैलालीको लम्कीमा रहेको मन्त्रीको घर डोजरले भत्काइरहदा स्थानीयले रमिता हेरिरहेका थिए । कसैले किन र कसरी भन्ने प्रश्न समेत गरेनन् ।
आखिर गरुन पनि किन ? अतिक्रमित सडक खाली बनाउने अभियान अन्तरगत मन्त्री बोहोराको घरमा नगरपालिकाले डोजर हानेको हो । पहुँचकै भरमा सडक अतिक्रमण गरेर बोहराले सडक अतिक्रमण गरेर घर बनाएका थिए । लम्की चुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईकै अगुवाईमा मन्त्रीको घर भत्काइएको हो ।
नगरपालिकाले १५ दिने सूचना निकालेर अतिक्रमित घर उठाउन भनेको थियो । त्यसपछि फेरि ७ दिने र अन्तिममा ५ दिने सूचना निकाल्दा पनि मन्त्री बोहराले सुने नसुनेझै गर्दै आएका थिए । उल्टै मन्त्री बोहोराले आफ्नो घर कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै आएका थिए । मेयर बजगाईले डोजर लगाउने आट गरे । हेर्दाहेर्दै मन्त्रीको घर भग्नावशेषमा परिणत भयो । मन्त्री बोहोराको घर भत्किरहँदा स्थानीय भन्दै थिए, ‘अहिलेसम्म टेरेको थिइनस्, बल्ल खाइस् ।’
बैंकिङ क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका बोहराले यसैगरी कैलालीको दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सडक र सार्वजनिक जग्‍गा अतिक्रमण गरेका छन् । लुम्की चुहा नगरपालिकालाई सुन्दर शान्त र समृद्ध बनाउने मेयर बजगाईको अभियानको क्रममा लम्कीमा मन्त्री बोहराले सडक अतिक्रमण गरेको भेटिएको थियो ।
बैकिङ क्षेत्रमा चर्चा कमाएका बोहराले प्रचण्डलाई पैसाको लोभ दिएर मन्त्री बनेको नेताकार्यकर्ताहरू बताउछन्। गत प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पैसा पेलेर टिकट पाउने केहि माओवादी उम्मेदवारहरुमध्य झपट बोहोरा पनि एक भएको माओवादी केन्द्रकै नेता कार्यकर्ताहरू बताउछन् ।
यसरी भत्कायाे मन्त्रीकाे घर डाेजरले हेर्नुहाेस भिडियाे
युक्रेनमा एक रुसी पत्रकारको गोली हानी हत्या
१३३ भवन अझै बनेनन् । ठेकेदार र भवन विभागको चरम लापरवाही
अखिल क्रान्तिकारीको कैलाली संयोजकमा बबरजङ चयन
कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका राष्ट्रपति ‘रुढीवादी काँग्रेसी’
२२ दिन अघि वेपत्ता महानगरका बरिष्ठ अधिकृत मृत भेटिए
लामो समयदेखि प्रतिक्षारत बक्स अफिस अब स्थापना हुने पक्का
भारतले फेरि बढायो बिजुलीको भाउ
दशैं विदा घट्यो, पृथ्वी जयन्ती विदा फेरि खारेज, कुन-कुन सार्वजजिक विदा काटिए ? (सूचीसहित)